अार्थिक खबर Archives - Page3of 118 - Purbeli News
काठमाडौँ / राणाकालीन समयमा निर्मित दरबार तथा भवन जीर्ण बनिरहेका छन् । झन् विनाशकारी भूकम्पले यस्ता भवनलाई जीर्णाेद्वारमै समस्या आउने गरी थिलथिलो बनाइदियो । अर्कातर्फ, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरका रुपमा रहेका जीवन्त पुरातात्विक महत्व बोकेका राणाकालीन भवनलाई मर्मत तथा जीर्णोद्वार गरी आकर्षक नेपाली मौलक शैलीका होटलका रुपमा रुपान्तरण हुन थालेका...
नेतालाई चुनावी चटारो, किसानलाई मलखादको हतारो
लहान । दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई चुनावको चटारोले गाँजेको बेला सिरहाका किसानहरूलाई भने हिउँदे बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलखादको अभाव हँुदा चिन्ता थपिएको छ । धान खेती स्याहार्दै गरेका किसानहरू तोरी, मसुरो दाल, आलु, गहुँलगायत हिउँदेखेती गर्ने तयारीमा रहेका बेला सिरहामा रासायनिक मलखादको आभाव हँुदा किसानहरू चिन्तित बनेका हुन् । सरकारले कृषि साम...
घट्यो सुनचाँदीको भाउ , यस्ताे छ अाजकाे मुल्य ?
काठमाडौं / साताको पहिलो दिन आइतबार (आज) सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । आज सुन प्रतितोल एक सय र चाँदी प्रतितोला १० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोल ५५ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार सुनको मूल्य ५५ हजार ४ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै आज चाँदी प्रतितोला ७ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रब...
काठमाडौं । मलेसियास्थित रिया आइएमईले दशैं र तिहारको अवसरमा ल्याएको ‘दशैं तिहारमा आइएमई गर्नुहोस् घर सजाउनुहोस्’ सेवाग्राहीमूखि व्यापार प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत दोश्रो तथा अन्तिम भाग्यशाली विजेता घोषणा गरेको छ । सफ्टवेयरमा आधारित रहेर गरिएको छनोट कार्यक्रममा रिया आइएमईका चार जना भाग्यशाली सेवाग्राहीहरु श्रीराम थापा, महेन्द्र शाह, संजित कु...
काठमाडौं / साताको अन्तिम दिन आज सुनको मूल्य घटेको छ । हिजोका तुलनामा आज सुन प्रतितोला एक सय रुपैयाँले घटेको हो । आज सुन प्रतितोला ५५ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो सुनको मूल्य ५५ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ । आज चाँदी ७ सय ६५ रुपैयाँ प्रतितोला कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
आधा दर्जन बढी कर्मचारीसहित अनील शाहले मेगा बैंक छाडे : सेञ्चुरीमा सीइओ नियुक्त !
काठमाडौँ / एक दशक मेगामा रहेर काम गर्दै अाएका बैंकर अनिल शाहले मेगा बैंक छाडेका छन् ।सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनेगरी उनले मेगा छाडेका हुन् ।पुस १ गतेदेखि नै सेञ्चुरीमा प्रमुख कार्यकारीको भुमिका निर्वाह गर्ने जानकारी छ ।
रुद्राक्षको कारोबारमा कमि आएसंगै कृषकहरू मार्कामा
धरान / तीनवर्ष यता रुद्राक्षको कारोबारमा कमि आएसंगै आम्दानीबाट घर चलाउदै आएका कृषकहरु चिन्तित बनेका छन् । विगतमा छिमेकी मुलुक चीन र भारत निर्यात हुने रुद्राक्ष एकाएक छिमेकी मुलुक निर्यात हुन छाडेपछि कृषकहरु चिन्तित बनेका हुन् । धरान–४ पत्रङबारीका कृषक प्रसाद राईले रुद्राक्ष दानाको कारोबार घटेसंगै घर व्यवहार चलाउनै गाह्रो भएको बताउनुभयो । विगतमा...
काठमाडौं / आज सुनचाँदीको भाउ आज बढेको छ । आज सुन प्रतितोला तिन सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सुन प्रतितोला ५५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै चाँदीको मुल्य पनि प्रतितोला १५ रुपैयाले बढेको छ । चाँदी प्रतितोला ७ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको भनाइ छ ।
१२ घण्टा नबित्तै पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्य बृद्धि फिर्ता
काठमाडौँ / नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठकले हिजो बढाइएको इन्धनको मूल्य मुल्य बृद्धि फिर्ता गर्ने निणर्य गरेको छ । मुल्य बृद्धिकाे १२ घण्टा नबित्तै साे निणर्य भएकाे हाे । निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा आपुर्ति सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाका अनुसार बिहीबार विहान १० बजेदेखि लागू हुनेगरी पुरानै मुल्यमा इन्धन खरिद-बिक्रि गर्नु पर्ने छ । न...
काठमाडौँ / नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । आज राति १२ बजेपछि लागू हुनेगरी खाना पकाउने एलपी ग्यास , पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको हो । नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल अब प्रतिलिटर रु १०० पर्ने आयल निगमले जनाएको छ । त्यसैगरी डिजेल र मट्टितेल लिटरको रु ७५ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ । अब ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु एक हजार ३५...